बोधित र वियंकालाई स्वर्ण – Khel Dainik
काठमाडौं (खेलदैनिक) । सुनसरीका बोधित डिसी र एपीएफकी वियंका राईले प्रथम मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रतियोगितामा सोमबार स्वर्ण जितेका छन् । जुनियर सिंगल्सको ब्वाइजमा बोधित र गल्र्समा वियंका पहिलो भएका हुन् ।
स्पिन इभेन्ट्स प्रा.लि. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताको ब्वाइज फाइनलमा बोधितले एपीएफका रुविन महर्जनलाई ११–६, ११–९ र ११–६ को सोझो सेटमा पराजित गरे । एजीएका हिमाल विष्ट र नेपाल प्रहरीका गनन्जय दाहालले तेश्रो स्थानमा चित्त बुझाए ।
लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको गल्र्स फाइनलमा वियंकाले आर्मीकी दिया देउलालाई सीधा सेटमा ११–७, ११–३ र ११–६ ले हराइन् । आदर्श विद्या मन्दिर (एभीएम) की आश्मा पहरी र काठमाडौंकी इना डंगोल तेश्रो भए ।
प्रतियोगितामा भेट्रानसहित विभिन्न ८ स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यसअघि भेट्रान पुरुष सिंगल्स ४० वर्षमाथि काठमाडौंका चन्दन शाही र ५० वर्षमाथि एलडीटीटीएका राजेन्द्र वज्राचार्य पहिलो भएका थिए । यु–१२ सिंगल्सको ब्वाइजमा एभरेष्टका आर्यन शाही र गल्र्समा प्रहरीकी शुभश्री श्रेष्ठ तथा क्याडेट सिंगल्सको ब्वाइजमा सुनसरीका सिद्धार्थ तामाङ र गल्र्समा एपीएफकी इभाना थापा मगरले पहिलो स्थान हात पारेका थिए ।
जुनियर सिंगल्समा पहिलो हुनेले २० हजार, दोश्रोले १० हजार र तेश्रोले ५÷५ हजार नगद पुरस्कार हात पारे । अन्य ६ स्पर्धामा शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः १० हजार, ५ हजार र २ हजार ५ सय÷२ हजार ५ सय का दरले नगद पुरस्कार पाए ।
ब्वाइजमा गोड स्पिनका रिवान वज्राचार्य, ललितपुरका रिजन शाक्य र एमआईएसका विशाल थापा उदीयमान खेलाडी घोषित भए । गल्र्समा एएनएस १९८० की अंकिता वज्राचार्य, अरुणीकी इच्छा चापागाईं र माउन्ट भ्यालीकी आशिका कासिछ्वा उदीयमान खेलाडी बने ।
विजेतालाई काठमाडौं महानगरपाकिला वडा ७ का अध्यक्ष कुलबहादुर महर्जन, अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्य, काठमाडौं जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष विनोद महर्जन, आयोजक स्पिनका अध्यक्ष सुमन शाक्य, टेबलटेनिसकी ८ पटककी राष्ट्रिय च्याम्पियन नविता श्रेष्ठ, टेबलटेनिसकै ६ पटकका राष्ट्रिय च्याम्पियन अमन चित्रकार, स्व. मिलन श्रेष्ठका परिवारलगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे । तीनदिने प्रतियोगितामा २ सय ५० खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेको स्पिनका सचिव ज्याकी महर्जनले जनाएका छन् ।
प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकमा अमेरिका बस्ने श्रवण चिपालु रहेका छन् । स्व. मिलन श्रेष्ठ टेबलटेनिसका पूर्व खेलाडी हुन् । स्पिनकै आयोजनामा भदौमा दोश्रो राष्ट्रव्यापी अन्तर वडा टेबलटेनिस प्रतियोगिता हुने सचिव ज्याकी महर्जनले जानकारी गराए ।
← अध्यक्ष पदका लागि फेरि शेर्पाको उम्मेदवारी घोषणा दुर्गामानले बनाए राष्ट्रिय कीर्तिमान →